Nnukwu ime ụlọ ịwụ ahụ na-ete akwa
Ngwa kacha ere igwe mma
Home Ngwa kacha ere igwe mma Nnukwu ime ụlọ ịwụ ahụ na-ete akwa
Ihe Nke 482306BN
Emechara: Emere ya
Allationdị nrụnye: A na-etinye mgbidi n’elu
Ihe: igwe anaghị agba nchara + 3M
N'ime ụlọ ịsa ahụ, enweghị ngwa nnabata dị mkpa karịa nko dị ala. N'agbanyeghị ụdị ejiji ma ọ bụ ihe eji eme ya, ndị na-emepụta ụlọ ịsa ahụ nke oge a na-achọ ịchekwa nchekwa nke etinyebere ya n'akụkụ ebe achọrọ ya kachasị. Iji nye onye ahia ihe ha choro n ’oru ya ma ka na-elekwasikwa anya n’uzo di nkpa, nko ndi a mapuru agha gha adi nma. Ọ bụ ezie na ị nwere ọtụtụ nhọrọ nhọrọ maka nko n'ime ụlọ ịsa ahụ, ọ bụ mmadụ ole na ole ga-enwekwu ọrụ ọkachamara na uwe na-ewu ewu karịa ndị a.
Iji atụmatụ aghụghọ na-enye ohere sara mbara ma na njedebe ụzọ aghụghọ ga-eme ka akwa nhicha ahụ, uwe ma ọ bụ brushes ghara ịda, ihe ndị a dị mma maka iji ya na akwa nhicha na njide ngwa. Ebe ọ bụ na ndị a na-anọgidesi ike na paịlị mgbochi mmiri 3M zuru oke, mmiri nwere ike idowe ebe ọ bụla ndị ahịa gị chọrọ ha. Ha agaghị emerụ mgbidi gị, taịl ịsa ahụ, ibo ụzọ ma ọ bụ ebe ọ bụla ọzọ, na-eme ka ha bụrụ ndị ọkachamara na-aga n'ihu maka ịkwakọba nchekwa nke nwere ike ibugharị dịka ihe gbanwere. Gịnị ọzọ ka ha ga-achọ?
• Ihe eji eji akwa nhicha akwa nke ime ụlọ ịgbara ọhụrụ
• Ọdịdị ọla edo emere maka ịrịọ arịrịọ ọgbara ọhụrụ
• Minimalistic na inogide
Mbụ: Omenala Towel Wall-Mounted O O
Omenala Towel Wall-Mounted O O
Sleek na ọkaibe Matte Black Tissue Holder na shelf
Leelọ ịsa ahụ na ebe ịsa ahụ na elu a na-acha uhie uhie Towel Bar